စင်ထရယ်ကုန်တိုက်သို ့အလည်တစ်ခေါက်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » စင်ထရယ်ကုန်တိုက်သို ့အလည်တစ်ခေါက်….
Posted by aye.kk on Jun 16, 2012 in Photography | 27 comments
ထိုင်း-မြန် မာ နှစ် နိုင် ငံ ထိ စပ် နေ သော ၊ တာ ချီ လိတ်-မယ် ဆိုင် က အ မြဲ စည် ကား လျှက် ရှိ နေ ပါ သည်။
နှစ် နိုင် ငံ ချစ် ကြည် ရင်း နှီး မှု အ ရ ၊ ထိုင်း နိုင် ငံ သား များ ၊ နိုင် ငံ ခြား သား များ လည်း တာ ချီ လိတ်-ကျိုင်းတုံ- မိုင်းလား အ ထိ သွား ရောက် လည် ပတ် ခွင့် ပြု ပေး သည့် အ တွက် လည်း ကောင်း ၊ တာ ချီ လိတ် ဒေ သ ခံ များ မှာ လည်း ၊ ထိုင်း နိုင် ငံ ချင်း ရိုင် ခ ရိုင် အ ထိ သွား ရောက် ခွင့် ပြု ပေး သ ဖြင့် အ မြဲ စည် ကား လျှက် ရှိ နေ ခြင်း ပင် ဖြစ် ပါ သည်။
ထိုင်း နိုင် ငံ ၊ ချင်း ရိုင် ခ ရိုင် သို့အ လည် သွားေရာက် စဉ် ၊ အ မှတ် တ ရ ရိုက် လာ ခဲ့ သော ပုံ များ ၊ ဂေ ဇက် မိတ် ဆွေ များ အား ပြန် လည် ဖော် ပြ လိုက် ပါ သည် ။
စင် ထ ရယ် ကုန် တိုက် အ ပေါ် ထပ် ။
အ ပေါ် ထပ် နှင့် အောက် ထပ် ကုန် တိုက် အ လှ ။
ကုန် တိုက် က မုန့် ဆိုင် ။
ကုန် တိုက် မှာ ၊ မှာ စား ၍ ရ နိုင် သော ဟင်း လျှာ များ ။
ရ ရှိ မှာ စား ကြ သည့် ဟင်း လျှာ များ ။
ကုန် တိုက် အ ပေါ် ထပ် နှင့် အောက် ထပ် ပါ ။
ကုန် တိုက် အ ပေါ် ထပ် က ဖျော် ရည် အ ရောင်း ဆိုင် ။
ကုန် တိုက် အ လှ ။
ကုန် တိုက် အောက် ထပ် အ လှ ။
ကုန် တိုက် အ ပေါ် ထပ် အ ရောင်း ပြ ခန်း တ ခု ။
အ ရောင်း ပြ ခန်း အ တူ တူ ပါ ပဲ ။
ကုန် တိုက် အောက် ထပ် လေး ပါ ပဲ ။
ကုန် တိုက် က ဓါတ် ပုံ အ လှ ရိုက် သည့် နေ ရာ ။
ချင်း ရိုင် မြို့တွင်း ည ရှူ ခင်း ။
ချင်း ရိုင် က ပီ စာ အ ရောင်း ဆိုင် ။
လိုက် ပို ့ပေး သည့် မိတ် ဆွေ နှင့် စား သောက် ဆိုင် က လုံ မ ပျို ။
ပြန် ခဲ့ ပြီ နော်….. ချင်း ရိုင် က ။။
လေးပေါက်က ပို.လိုက် အစ်မ အေးကေကေက ပို.လိုက်နဲ. တရုတ်ပြည်တော့ နှံသွားပြီး…….. မုန်းတွေ အများကြီး ဟိဟိဟိ မနက်စောစော စီးစီး သွားကြည့်မိတာ ဒုက္ခတော့များပြီ……. ဗိုက်ကစာလာပြီး အဟင်ဟင့်…….. စားစရာလဲ ဝယ်လို.မရတော့ဘူး ရုံးရောက်နေပီ…………..
အော် အောက်ဆုံးက လုံမပျိုလေးကြည့်ပြီး ဗိုက်ပြည့်သွားပြီး ဟိဟိဟိဟိဟိဟိ ချစ်ချာယေးတော့ ခွိခွိခွိ……
လေးပေါက်က တရုတ်ပြည် အစ်မ အေးကေကေက ထိုင်း လို.ပြောတာ မွှားတွားရှို. သွေးပချိ သွေးပချိ
အန်တီအေး နဲ့ အန်ကယ်ပေါက်တို့ကတော့ ခြေထောက်မှာ ဗွေပါကြထင်ပါရဲ့..။ အန်တီတို့ အန်ကယ်တို့၏ ဤရှည်လှပါသော ခြေများကြောင့် ရွာသူားအပေါင်းတို့ ဗဟုသုတများ များစွာတိုးပွားကြကုန်၏။ ရွာ၏ ကျေးဇူးရှင်ကြီးများ ကျန်းမာကြပါစေကြောင်းနှင့်…။
အရှေ့နဲ့ အရှေ့မြောက်ရပ်က ဒါ့ပုံများကိုဖြင့် မြင်ရကြည့်ရပြီးပြီ..။ အနောက်အရပ်ကိုရော အန်တီနဲ့အန်ကယ်တို့ ခြေရှည်ဖြစ်အုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဒါ့ပုံများကို မျှော်လင့်နေကြောင်း.။ (ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတော့ ရိုက်ခဲ့ကြနဲ့နော်..)
အဲဒီနောက်ဆုံးပုံက စားသောက်ဆိုင်ကို မရောက် ရောက်အောင် သွားမယ်။
ထင်သားပဲ ဒီလူကြီး ဒါမျိုးလာပြောတော့မယ်ဆိုတာ…..ဟဟဟဟ
အန်တီ ရေ ပန်ကန်ထဲက ကညွတ် ကလေး နဲ့ ပုဇွန် ကင်းမွန် နှိုက်စားသွားပါတယ်။
Thanks for ur nice photo
Eye shopping ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
ကုန်တိုက် Ceiling နဲ့ ဖျော်ရည်ဆိုင်က ထိုင်ခုံ အကြည်လေးမျက်စိထဲ စွဲနေအောင်လှလိုက်တာ။
ဒါနဲ့ တူကို ပြောင်းပြန်ကိုင်ထားသလိုပဲ……အဟီး.. စတာနော်…။
Shopping ထွက်ရင်း ဗိုက်ပါဖြည့်သွားပါတယ်။
Lotus ကုန်တိုက်ကိုလည်း ကြုံရင် ရိုက်ပြအုန်းနော် အန်တီအေး။
ထိုင်း၊ ဘရာဇီး၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ ကာဆာဗလန်ကာတို့က
တားတား ဘန်ကောက်ရောက်တုန်းက လုံမပြိုလေးနဲ့
ရိုက်ခဲ့တဲ့ တစ်ပုံလောက် ထုတ်ကြွားလိုက်ရင်…
ကပေ့နဲ့ အူးဗိုက်၊ နှူဘားဂီဂီတို့ မနာလိုဖြစ်နေမှာ
အန်တီ ခရီးတွေများများသွား ဓါတ်ပုံတွေ များများရိုက်နိုင်ပါစေ…
ရေလည် ခမ်းနားလှတဲ့ ကုန်တိုက်ကြီးဗျာ..
အန်တီအေး ကျေးဇူးနဲ့တားတို ့ရွာသားတွေ ထိုင်းတစ်ခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် ကြည့်ဖူးရတော့မယ်ထင်တယ်ဗျာ..
ကုန်တိုက်ကြီးက ကျယ်လည်းကျယ် ကြီးလည်းကြီး
အောက်ကပုံတွေမှာလည်း ဆိုင်ကယ်တွေရပ်ထားတယ် ညီနေတာပဲ
အခု ရန်ကုန်မှာတောင် တော်တော်တိုးတက်လာလို့ ကုန်တိုက်ကြီးတွေ ပေါ်လာတာ။
ဒါတောင် အခု စင်တရယ်ကုန်တိုက်ကြီးကို မမှီဘူး။
လူတွေရဲ့ စားနိုင်သုံးစွဲနိုင်အားက မလိုက်နိုင်ဘူး ထင်ပါရဲ့။
လှိုင်သာယာမှာ Diamond Shopping Mall ဖွင့်တာ ဘယ်လောက်မှ မကြာသေးဘူး။
ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး အားရပါးရ လျှောက်လည်ချင်မိပါရဲ့။
လည်ဖို ့နေရာတွေကိုယ်တိုင်လိုက်ပို ့ပေးပါရစေ။။
ဒီလိုကုန်တိုက်ကြီးမျိုးက မြန်မာပြည်လဲ မကြာခင်ရောက်လာပါတော့မယ်။
ရန်ကုန်မှာလဲ ရှေ့နှစ်လောက်ဆို အဲ့လိုကုန်တိုက်ရှိလာတော့မှာ…
မရောက်ဖူးတဲ့နေရာအလှတွေကို မအေးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ အတော်မြင်ဖူးပြီ…
ဟီးးးးးးးးးးး ဒီနေ့ဟင်းမကောင်းလို့ ထမင်းမစားပါဘူးဆိုမှ